Home News Shirkii Dowlad Goboleedyadda oo maanta ka furmay magaalada Garowe
Shirkii Dowlad Goboleedyadda oo maanta ka furmay magaalada Garowe
Waxaa daqiiqado ka hor la soo gabagabeeyay xafaladii furitaanka Shirkii Dowlad Goboleeyadda ee maanta ka furmay magaalada Garowe.
Kulanka ayaa laga jeediyay qudbado kala duwan kuwaas oo si toos ah u taabanaayay colaada siyaasadeed ee ka dhaxeeysa dowladda Fedaraalka iyo Dowlad Goboleedyadda. Madaxda shirka ka soo qey gashal ayaa sheegtay in ay gaba-gabada shirka ay soo saari doonaan go’aano muhim ah oo u hiilin doona qaranimada Soomaaliya.
Previous articleGudoomiyaha Baarlamaanka K/galbeed oo ku dhawaaqay Gudigga Doorashooyinka Maamulkaasi!!
Next articleMW Axmad Madoobe: “ cid gooni ah go’aan kama gaari karto qaabka doorasho dalka uga dhaceyso, horay uma dhici, mana dhici doonto , taladda dalka…..”
Qaramada Midoobey oo Doonyo Dheereeya ku wareejisay Maamulka Puntland
Magaalada Muqdisho oo Martisa Dilal,Dagaalo,Isqabqabsi Dhuleyd&Dagaal Beeleedyo Laga Cabsi Qabo